विद्यालय तहबाट हस्पिटालिटी म्यानेजमेण्टको शिक्षाकालागि पाठ्यक्रम विकास – Samacharpati
साेमबार, असार २३, २०७६
पोखरा, २३ असार । नेपालमा माध्यमिक तहको शिक्षा दुई धारको सञ्चालन भएको छ । साधारण धार र प्राविधिक तथा व्यावसायिक धार वि.सं.२०७० सालबाट प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कक्षा ९ बाट सुरु गरियो । सुरुमा बाली विज्ञान, पशु विज्ञान, इलेक्ट्रिकल, सिभिल र कम्प्युटर इन्जिनियरिङ्,तर्फको शिक्षादिन सुरु गरियो भने वि.सं. २०७३ सालबाट संगित शिक्षा दिन थालियो । यो शिक्षामा ४० प्रतिशत सैद्धान्तिक र ६० प्रतिशत प्रयोगात्मक शिक्षा दिइन्छ ।
वि.सं. २०७५/०७६ सालमा पब्लिक हेल्थ, अटोमोवाइल एण्ड मेकानिकल र हस्पिटालिटी म्यानेजमेण्ट तर्फको पाठ्यक्रम विकास गरिएको छ । हस्पिटालिटी म्यानेजमेण्टतर्फको प्रस्तावित पाठयक्रमका सन्दर्भमा नेपाल टुरिजम एण्ड होटल म्यानेजमेण्ट कलेज छिनेडाँडा पोखरामा पृष्ठपोषण प्राप्तिका लागि प्रशिक्षक, विद्यार्थीहरुबाट राय सुझाव संकलनकालागि कार्यशालाको आयोजना गरिएको छ ।
यस कार्यक्रमबाट प्राप्त पृष्ठपोषणले नेपालको पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापनको क्षेत्रमाआवश्यकीय पाठ्यक्रमलाई समय सान्दर्भिक बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । कार्यक्रमको आयोजना पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गर्नुका साथै संयोजन नेपाल टुरिजम एण्ड होटल म्यानेजमेण्ट कलेज पोखराका प्राचार्य प्रकाश रेग्मीले गर्नु भएको थियो ।
एभरेष्ट बैंक लिमिटेडद्वारा नया एक्सटेन्सन काउन्टर संचालन